Apple ayaa cusbooneysiineysa iPad-ka oo hadda leh shaashad 10,2-inji ah | Wararka IPhone
Apple wuxuu soo saaray iPad cusub oo 10,2-inji ah
Intii lagu guda jiray Muhiimka maanta, Apple wuxuu go'aansaday inuu cusbooneysiiyo noocyada iPad-ka caadiga ah, kuwa ugu iibinta badan uguna caansan inta badan dukaamada. Hadda waxay go'aansadeen inay ku ballaadhiyaan iPad-ka wax soo saar 10,2 inji ah iyo laba jeer ka dhakhso badan mahadnaqa shaashadda 'Retina Display screen'. Waxaan kuu sheegeynaa waxa ay yihiin dhammaan wararka ku saabsan iPad-ka cusub ee 10,2-inji ah oo loogu talagalay in sida ugu badan looga faa’iideysto nidaamka cusub ee iPadOS-ka ku shaqeeya. taasi waxay noo oggolaan doontaa inaan ka soo saarno dhammaan waxqabadka shey u yimid inuu beddelo PC-ga soo jireenka ah ee nolosha. Aynu eegno badeecadan cusub ee ka socota shirkadda Cupertino.
IPad-kan "cusub" ee 10,2-inji ah ayaa hayn doona Aqoonsiga Taabashada markaa horay uma sii socoto, tusaale ahaan, Teknolojiyada Aqoonsiga Aqoonsiga, laakiin waxay la jaanqaadaysaa baahiyaha qalin-qoriga Apple-ka oo ay ku jiraan Smart Connector, sidaa darteed waxay la jaan qaadi doontaa teebabka jireed iyo agabka qalabka. Waxaa laga dhisi doonaa 100% aluminium dib loo warshadeeyay, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah wax soo saarka ugu cagaaran ee shirkadda Cupertino ay billowday sannadihii la soo dhaafay. Waxay lahaan doontaa processor-ka A10 Fusion ee caanka ku ah caanna ku ah, marka lagu daro kamarad gadaal ah oo 8MP ah oo u adeegta wax ka badan wax kasta oo jidka looga baxo.
Dhinaca kale, qiimuhu wuxuu noqon doonaa $ 329 sida iPad-ka 2018 markaa sicirka lama xoojin doono, aragti ahaan wuxuu ahaan doonaa € 350 gudaha Isbaanishka markay tahay Sebtember 30, in kastoo horay loo ballansan karay. Shaki la'aan Apple ayaa mar kale sharad ku gashay iPad-ka, kaas oo sidoo kale la imaan doona sanad Apple TV ah + hadiyad ahaan, iyo haddii aad ka faa'iideysato Apple ee "ku soo noqoshada dugsiga" hadda ay bixiso, waxaad xitaa qaadan doontaa laba dhego . Kama fikiri karo in si guul leh loo bilaabo shirkadda Cupertino si aan u sii wado faafitaanka iPad-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple wuxuu soo saaray iPad cusub oo 10,2-inji ah
Apple waxay soo bandhigaysaa iPhone 11 cusub oo leh naqshad cusub iyo 6 midab oo la heli karo
Muhiimka ah 2019: ku bilaw bandhigga Apple Arcade